Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Mbudzi 18, 2020
Vanhu vaviri vanofa nechirwere cheCovid-19, ukuwo vanhu makumi mana nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro, vose vari vanhu vagara vari munyika, kunze kwemumwe chete akabva kubva kuTanzania.
Dare repamusoro rinoisa mutongo waro parutivi pachikumbiro chemutori wenhau, Hopewell Chin’ono, chekuti apihwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti atongwe achibva kumba kwake. Dare rati richapa mutongo waro nemusi weChishanu
Zimbabwe yosvitsa makore matatu iri pasi paVaEmmerson Mnangagwa, mushure mekubviswa nechisimba kwakaitwa vaimbove mutungamiri wenyika, muchakabvu VaRobert Mugabe.
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vanotoresa mhiko chikwata chiri kuferefeta nyaya dziri kupomerwa mutongi wedare repamusoro, Amai Erica Ndewere.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa me sangano reProudly263 Global, iro riri kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nemikana yekutanga mabhizimusi.